क्रिसमस - यो दुनिया inexplicable चमत्कार धेरै छ जब एक समय छ। तसर्थ, क्रिसमस प्रेतविद्यासम्बन्धी अक्सर विश्वसनीय हुन मानिन्छ। हामी कुनै पनि यी दिन आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ पाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, मनोवैज्ञानिक र तन्त्रमन्त्रमा र धेरै वर्ष को लागि esoteric, यो सिफारिस गरिएको छ संलग्न ती यी संस्कार, एक हात मा, एकदम गम्भीर व्यवहार र सुरक्षित साबित गरेको प्रेतविद्यासम्बन्धी लागि सबैभन्दा सामान्य विकल्प, चयन गर्न।
अर्कोतर्फ, धेरै प्रेतविद्यासम्बन्धी को परिणाम छैन "प्राप्त फँस" गर्न सक्नुहुन्छ, वा विचार नै निर्देशन, जो आत्म-कार्यक्रम गर्न सक्छ मा निरन्तर निर्देशित गरिनेछ भन्छन्। के तपाईं सहमत हुनेछ, यदि यो केही नकारात्मक पूर्वानुमान सम्बन्धित कार्यक्रम गर्नुपर्छ, राम्रो छैन। उदाहरणका लागि, त्यो विवाहको क्रिसमस मा अनुमान गर्न कसरी सिके र त्यो, त्यो विवाह गर्न यस वर्ष जारी गरिने छैन खसे। तपाईं लगातार यस्तो परिणाम सोच्न भने, दुःखी मुड त्यहाँ गठन गरिनेछ, र शायद प्रेतविद्यासम्बन्धी बाबजुद विवाह गर्न एक मौका छुटेका गरिनेछ।
हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी क्रिसमस मा अनुमान गर्न उच्च sensitiveness द्वारा विशेषता छन् जो मान्छे, साथै कारण हास्य र शंका यो प्रक्रिया आबद्ध गर्नेहरूलाई। भावनात्मक महिलाहरु को लागि एक्लै दर्पण मा अनुमान गर्न परम्परा हुक्म रूपमा, कतै मध्यरात मा अटारी मा सिफारिस गरिएको छैन।
साँच्चै, यी conjectures मा उदाहरणका लागि, दुई मोमबत्ती बीच प्रकाश गर्न, प्रत्येक अन्य सामना दुई दर्पण राख्नु र लामो गाढा गलियारे, जो गाद को मुद्दा सम्बन्धित केही वस्तुहरू र मान्छे prividetsya सक्नुहुन्छ मा नियाल्थे, आवश्यक छ। यस मामला मा दृश्य र मानसिक तनाव एक पर्याप्त ठूलो ताप पुग्न सक्छ र केही अवस्थामा तस्बिरहरू गंभीर डर वा बेहोशी हुन सक्छ देखा, त्यसैले अनुमान साथीसँग एक भन्दा राम्रो छ, र सँगै।
र यहाँ भविष्यमा पति को बाल रंग, धेरै थाह छ हेर्न, घर मा को लागि क्रिसमस अनुमान गर्न कसरी, र यो मात्र गर्न सकिन्छ छ। यो अन्त गर्न, कोर्नु लिएको र एक खलिहान मा हङ (को कोठरी मा आधुनिक घरमा) छ। को शिखा मा अर्को दिन को लागि विचार भविष्यमा प्रेमी केश समान बाल रंग देखा पर्छ। तपाईं पनि कौसी बाहिर जाने गर्न सक्नुहुन्छ, र यसो भन्छन्: "कोठा, कोठा कुकुर। जहाँ एक कुकुर छाल, त्यहाँ मेरो betrothed बसोबास। " प्रतिक्रिया जहाँ भविष्यमा पति जीवित छेउमा मा भौंक सुन्न सक्छ। को भौंक कर्कश भने - पति पुरानो छ, र घन्टी यदि - जवान। अधिक टाढाको भौंक, अधिक त्यो एक विवाहमा बस्नेछन्।
मोम मा लागि क्रिसमस अनुमान गर्न कसरी जान्न, "व्यञ्जनहरु" को धेरै भन्नुभयो। तर, साहसी यो दूध र brownie चुनौती उहाँको मदत के। यो गर्न, दूध र उज्ज्वल मैनबत्ती (सेतो छैन), सीमा गर्न अनुकूल लिन सीमा गर्न प्वाला सेट, यो मा दूध गर्म मोम खन्याइन् र दूध निन्दा मा हालिएको छ "हजुरबुबा brownie, दूध मोम खान पिउन, सीमा आउन"। निष्कर्ष दूध मा परिणामस्वरूप टुक्रा आधारमा गरिन्छ। सेवा राम्रो भाग्य, पट्टी - - सडक गर्न, मानव आकृति - यो तारा हुन सक्छ नयाँ मित्र लागि, एक घर - पैसा को लागि, र सतह मा मोम को पातलो सर्कल - - पाठ्यक्रम, विवाह, सानो सर्कल को - एउटा परिवार, को घन्टी सुरु गर्न कुल सफलता। प्रामाणिकता लागि अर्को मैनबत्ती भन्दा एक चम्चा मा मोम अप न्यानो गर्न आवश्यक र सबैभन्दा आकस्मिक आन्दोलन खन्याउन
अनुभवी gadalschitsy आगामी महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको मिति बारे पत्ता लगाउन क्रिसमस मा अनुमान गर्न कसरी थाहा छ। उदाहरणका लागि, यो गर्न, जब मोम मा प्रेतविद्यासम्बन्धी तिनीहरूले परिणामस्वरूप कम ज्वारभाटा मोम तथ्याङ्कले मा देख रहे। उदाहरणका लागि, संख्या ज्योति बाहिर गरिएका र सतह मा नाउहरु भने, कि दिन भाग्य केही पालो सम्म अर्थ र आंकडा विशाल गरिएका र तल डूब छ भने - यो वर्ष वा दशक हुन सक्छ।
क्रिसमस हव्वाले छुटेका गर्नेहरूका लागि, तपाईं कसरी क्रिसमस बिहान अन्दाज लगाउनु गर्न सिक्न सक्छन्। यो गर्न, तपाईँले गर्नुपर्ने टूर्कू कफी मा खाना पकाउन पिउन पेय, र प्वाला मा बाँकी फ्लिप-मैदान को कप। एक समय पछि, कप हटाइएको हुन सक्छ, र भविष्यको लागि जवाफ पत्ता। तसर्थ, बाक्लो मतलब समाचार Crosses को सतह मा बुलबुले - सावधानी को संकेत, बीचमा वृद्धि - सफलता, deepening - विफलता, कालो, स्पष्ट स्ट्रिप्स को - इच्छा पूरा।
निष्कर्ष मा, फेरि म प्रेतविद्यासम्बन्धी को परिणाम ध्यान र आफ्नै भाग्य को निर्माता हुन, किनभने आवश्यक छैन भनेर याद गर्न चाहनुहुन्छ हरेक कार्य एक निश्चित दिशा मा हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ।
किन घर को चरा विन्डो लड्न?
Menopausal सिंड्रोम। एक महिलाको जीवनमा कठिन
घरमा फरास भएमा के गर्ने? तपाईं तिनीहरूलाई कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
जीवनी Nikolai Tsiskaridze: मुग्ध पार्ने संगीतको र जीवनी
प्राकृतिक विज्ञान को वर्गीकरण
संपर्क लेंस संग hydraclear Acuvue अग्रिम: समीक्षा र सुविधाहरू